Apple က Mac App Store ၏လက်မှတ်များမှာပြproblemsနာများကိုရှင်းပြသည် ငါက Mac ပါ
Apple က Mac App Store လက်မှတ်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြexplainsနာကိုရှင်းပြသည်
ယရှေု Arjona Montalvo | | Apple, Mac OS X ကို
Apple မကြာသေးမီကဖြစ်ရတဲ့အရာကရှင်းပြသည် Mac App Store မှဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်စစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်းကိစ္စများ။ developer များထံသို့အီးမေးလ်တစ်ခုအနေဖြင့်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကိုကတိပေးသည် လာမည့် OS X ကို update။ 'Thumbtack' နှင့် 'Watermarker 2' ကဲ့သို့သောအက်ပလီကေးရှင်းများကိုတီထွင်ထုတ်လုပ်သူ Donald Southard Jr. က Apple ၏အီးမေးလ်တစ်စောင်ကိုတွစ်တာတွင်တင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်ကုမ္ပဏီသည်စစ်မှန်ကြောင်းပြသခြင်းပြproblemနာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အကြောင်းအရင်းကိုရှင်းပြပြီး၎င်းသည်အသုံးပြုသူအများစုအတွက်ပြproblemsနာမရှိစေရန်စီစဉ်ထားသည့်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းအခိုင်အမာဆိုထားသည်။ (ဆောင်းပါး၏အဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤပြproblemနာအတွက်သင့်အားအဖြေပေးသည်။ ).
Mac App Store မှအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ဟောင်းသက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်ကိုမျှော်လင့်လျက်စက်တင်ဘာလတွင်လက်မှတ်အသစ်တစ်ခုထုတ်ပေးခဲ့သည်။ အသစ်လက်မှတ်ကို algorithm ကိုအသုံးပြုခဲ့သည် SHA-2 အရာသူတို့ကလက်ရှိစက်မှုလုပ်ငန်းအလေ့အကျင့်အတွက်ပိုမိုအားကောင်းသည်, အဟောင်းလက်မှတ် algorithm ကိုအသုံးပြုခဲ့သောအတွက် SHA-1.
ကံမကောင်းစွာဖြင့် Mac App Store ရှိသိမ်းဆည်းခြင်းပြissueနာသည်အချို့အသုံးပြုသူများအားသူတို့၏ system ကို reboot လုပ်ရန်နှင့် update certificate system ၏ system cache ကိုရှင်းလင်းရန် Mac App Store သို့ပြန်လည် authenticate လုပ်ရန်ဖြစ်စေခဲ့သည်။ လာမည့် OS X update တွင်ဤ cache ပြissueနာကိုကျွန်ုပ်တို့ဖြေရှင်းနေပါသည်။
Apple ကဆက်လက်ပြီးတော့ဒါကိုထပ်မံရှင်းပြခဲ့သည် လက်မှတ်အသစ်တစ်ခုထုတ်ပေးခြင်း နှင့်လိပ်စာ cache ပြproblemနာဤပြproblemsနာများအားဖြေရှင်းနိုင်မည့်နောက်ဆုံးသတင်းအချက်အလက်များကို၎င်းထံသို့ပေးခဲ့သည် AppleCare အထောက်အကူပြုအဖွဲ့ အသုံးပြုသူများသည် Apple နှင့်ဆက်သွယ်ပါကသင့်တော်သောသတင်းအချက်အလက်နှင့်အကူအညီကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ပြaddsနာအများစုကိုဖြေရှင်းပြီးပြီဟုအက်ပဲလ်ကထပ်မံပြောကြားခဲ့သည် အချို့သောလျှောက်လွှာများမှာစစ်ဆေးမှုများမအောင်မြင်ပါ.
ယေဘုယျအသုံးပြုသူများအတွက် Apple သည်ဤပြproblemနာကိုဖြစ်ပေါ်စေသောပြmanyနာများစွာကိုကိုင်တွယ်ပြီးပြီဆိုတာသိရတာကောင်းပါတယ်။ မည်သည့်အချိန်တွင် operating system ကိုမည်သည့်အချိန်တွင်အဆင့်မြှင့်တင်မည်ကိုကုမ္ပဏီကပြောကြားခြင်းမရှိသေးသော်လည်းမကြာမီမြင်တွေ့ရမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ သင်၏အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့် Mac App Store ရှိအခက်အခဲများရှိနေသေးလျှင်၎င်းကိုလုပ်ရန်ကြိုးစားနိုင်သည် ဂိတ် ဒီချပြီး အမိန့်အရာဖြေရှင်းချက်ပေးသငျ့သညျ။
Mac App Store လက်မှတ်ပြproblemနာနှင့် ပတ်သတ်၍ သင်ပြန်ဖွင့်ရန်မလိုအပ်ကြောင်းအတည်ပြုပြီးသည်။ အဲဒီအစား: $ killall -KILL storeaccountd
- Craig Hockenberry (@chockenberry) နိုဝင်ဘာလ 12, 2015
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » Apple က Mac App Store လက်မှတ်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြexplainsနာကိုရှင်းပြသည်
Apple Watch အတွက် Magnetic Dock ကိုယခုရောင်းချပါပြီ
Apple Pay သည်ဘဏ်အသစ်များနှင့်ချေးငွေဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအတွက်အထောက်အပံ့ထပ်မံပေးသည်